LibreELEC: ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụlọ ọrụ mgbasa ozi a | Akụrụngwa n'efu
LibreELEC: ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụlọ ọrụ mgbasa ozi a
Ọ bụrụ na ị nwere otu Ntu Pi (ma ọ bụ usoro ARM ndị ọzọ) ma ọ bụ PC x86, ma ịchọrọ ịtọ ntọala multimedia, mgbe ahụ ịnwere ike ịdabere na ọrụ ahụ LibreELEC. Site na ya ị nwere ike ịnwe ọdịnaya multimedia gị niile n'otu ebe ị ga-esi họrọ ma kpọọ ya ọfụma.
Nhọrọ ọzọ na uzo ozo dika OpenELEC, OSMC, na ndị ọzọ Sistemụ arụmọrụ maka Pinakwa ndị a ma ama ndị emu na ị nwekwara maka SBC a ma ama.
2 Banyere LibreELEC
2.1 Esemokwu: LibreELEC na OpenELEC na OSMC
Ihu ọma a multimedia center, ma ọ bụ mgbasa ozi-center, bụ sọftụwia nke na-achịkọta ihe niile ịchọrọ iji nweta ọba akwụkwọ gị nke ihe oyiyi, audios, na vidiyo na aka, na-enwe ike ijikwa ma kpọọ ha mgbe ọ bụla ịchọrọ ịnụ ụtọ ọtụtụ mgbasa ozi ịchọrọ site na nkasi obi nke sofa ụlọ gị.
Ogige mgbasa ozi nwere ike inweta nke a ọdịnaya site na nchekwa nchekwa mpaghara, dịka draịvụ dị n'ime, osisi USB, kaadị ebe nchekwa, wdg, ma ọ bụ site na isi mmalite site na ịnweta ịntanetị.
Somefọdụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-etinyekwa n'ọrụ ọrụ maka ọrụ ndị ọzọ dị ka igosipụta ọwa telivishọn, ọdụ redio, na ọbụna ịwụnye obere ngwa ma ọ bụ mgbakwunye iji gbasaa ikike ya karịa nke ahụ. Na nkenke, ha bụ sistemụ arụmọrụ zuru oke na ihe niile ịchọrọ (ndị ọkwọ ụgbọ ala, ndị egwuregwu, ndị njikwa ọdịnaya, kodeks, ...) ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ntụrụndụ na oge ezumike karịa mgbe ọ bụla.
Otu n’ime sọftụwia izizi nke ụdị a bụ Microsoft Windows Media Center, ụdị nke ewepụtara na Windows nwere ụfọdụ ọrụ iji nụ ụtọ multimedia na TV ma ọ bụ HTPC n'ime ime ụlọ gị. Mgbe nke ahụ gasị, ọnụ ọgụgụ nke ọrụ yiri nke a mụbara ka etinyere n'ime ọtụtụ ngwaọrụ dị ka njikwa egwuregwu vidiyo, PC, smart TV, wdg.
Have nwere ugbu a ọrụ dịgasị iche iche dika MythTV, OpenELEC, OSMC, Kodi, wdg.
LibreELEC na-anọchi anya Libre Embedded Linux Entertainment Center, ndụdụ nke ọrụ OpenELEC. Ya mere, o nwere ọtụtụ myirịta na nke ọzọ. Nke ahụ pụtara, ọ na-eketa ọtụtụ n'ime njirimara nke otu a, ọ bụ ezie na ọ gbanwere ụfọdụ. Ma jigidesie ụkpụrụ JeOS ike ka usoro ahụ dị mfe dị ka o kwere mee.
N'ezie, ọ bụ GNU / Linux distro na jiri Kodi na-arụ ọrụ, kpọmkwem otu ihe ahụ dị ka OpenELEC. Ma ọ bụrụ na ọ kewapụrụ ya na ọrụ ọzọ a ọ bụ naanị n'ihi ụfọdụ nghọtahie okike dị n'etiti ndị mmepe ya, na-ekpebi iburu ụzọ ọzọ iji mepụta ọrụ nke aka ya. N'ime esemokwu dị iche iche bụ ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ule ha na-eme tupu ịtọhapụ ụdị anụ na LibreELEC.
Ugbu a ọ nwere nnukwu mmepe obodo na ndị na-eso ụzọ ole na ole, na-edobe usoro a nke ọma ma rute ọnọdụ - LibreELEC na isi, n'agbanyeghị na ọ bịarutere mgbe e mesịrị.
Ozi ndị ọzọ - LibreELEC Official weebụsaịtị
Esemokwu: LibreELEC na OpenELEC na OSMC
LibreELEC ọ bụ ihe ọzọ na OSMC na OpenELEC. Ma, site na ịhọrọ oke, ndị ọrụ nwere oge siri ike ịhọrọ nke kachasị mma. Ma nke bụ eziokwu bụ na onye ọ bụla n'ime ha ga-abụ nnukwu nhọrọ. Agbanyeghị, enwere obere nkọwa nke tinyela LibreELEC n'isi.
OpenELEC dịtụ mgbagwoju anya iji wụnye karịa LibreELEC.
LibreELEC na-echekwa nke ọma ma rue oge ọ bụla ma e jiri ya tụnyere ọrụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị jiri Raspberry Pi, LibreELEC na-agba ọsọ nke ọma na ya.
LibreELEC enweghị ụfọdụ nsogbu nchekwa nke ọrụ ndị ọzọ dịka OpenELEC gosipụtara.
Kodi abụghị nhọrọ karịa ndị ọzọ dị ka OpenELEC ma ọ bụ OSMC, ebe ha na-ejikwa ya, mana ọ nwere ike ịbụ uru karịa ọrụ ndị ọzọ na-adịghị ahụkebe na-anaghị eji Kodi.
Ọ dị nnọọ mfe karịa OSMC, nke bụ distro zuru oke, ọ bụ ezie na nke a na-egbochi ikike nke "ELEC".
Ma ị na-achọ wụnye LibreELEC na gị Ras Pi dị ka na kọmputa ọzọ, ị nwere ike ịgbaso usoro ndị a:
LibreELEC dị maka bọọdụ Raspberry Pi SBC n'ụdị ya dị iche iche, Odroid C2, WeTeK Core, Rockchip RK3288 / RK3328 / RK3399, LePotato, Khadas VIM (AML S905X), Mpempe / Mpekere 3, na x86-64 PC. Na mgbakwunye, ị ga-echeta na ị nwere ike ibudata onyonyo ma wụnye ya aka ma ọ bụ jiri ngwa gọọmentị iji mee ka ọrụ gị dị mfe ...
download ihe LibreELEC USB / SD Creator app site ukara website.
Họrọ mbipute maka sistemụ arụmọrụ gị Linux, macOS ma ọ bụ Windows.
Windows: dị nnọọ ibudata .exe na pịa abụọ iji gbaa ya.
MacOS: Can nwere ike okpukpu abụọ pịa nbudata .dmg ebudatara ma ọ bụ dọrọ ya na Ngwa. Mgbe ahụ ị nwere ike ịmalite ngwa ahụ.
Linux: ozugbo ibudatara ihe oyiyi .bin, soro iwu ndị a:
cd ~ / nbudata
Ozugbo ebudatara, site na ngwa ahụ n'onwe ya ị nwere ike ịhọrọ ụdị nke LibreELEC ịchọrọ ibudata, yana kee usoro Ntinye kaadi USB ma ọ bụ SD na-enweghị iji ngwa ndị ọzọ dịka Etcher na ihe ndị yiri ya. Ihe ngosi eserese ya dị mfe enweghị ihe omimi, ị ga-ahụ na ọ dị oke mfe.
Ozugbo emepụtara mgbasa ozi, tinye ya na ngwaọrụ ebe ịchọrọ ịgba ya na voila ... Dịka ọmụmaatụ, tinye SD n'ime Rasberi Pi na amalite maka oge mbụ LibreELEC. Cheta na oburu na PC, ichoro ihe kwesiri ekwesi na BIOS / UEFI ...
¡Ugbu a iji nwee obi ụtọ nke ọdịnaya niile multimedia na-enweghị nsogbu!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » LibreELEC: ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụlọ ọrụ mgbasa ozi a
Utu Pi Compute Module 4: Ntugharị Mgbakọ Ọhụrụ
Archimedean screw: kedu ihe ọ bụ na otu esi ewu ụlọ n'ụlọ